New USB-C na HDMI 4K ntụgharị si Satechi | Esi m mac
New USB-C na HDMI 4K ntụgharị si Satechi
Pedro Rodas kwuru | | Mac kọmputa
O doro anya na ọdịnihu nke nhazi vidiyo bụ 4K na anyị na-ahụ otu n'ime ihe na-erughị afọ abụọ, teknụzụ 4K na ndị nyocha na televishọn abụrụla ihe dị oke ọnụ ala. Ihe a niile bụ n'ihi na ụlọ ọrụ na-ahụkarị ọdịyo maara na teknụzụ na-aga n'ihu na-akawanye mma na 4K ga-abụ ọkọlọtọ ugbu a.
Apple maara nke ahụ n'isi ụtụtụ na ọ bụ ya mere na ọtụtụ afọ gara aga ọ malitere site na ntaneti anya na laptọọpụ ya wee mezie ya na 4K na 5K screens na 21 na 5-inch iMac n'otu n'otu.
Nke ikpeazu MacBook Pro ọkọnọ ma na 2016 na emelitere na 2017 bụ kọmputa na nke a nke na nke mbụ naanị ha nwere ọdụ ụgbọ USB-C. Onye mbụ wepụtara ụdị ọdụ ụgbọ mmiri a bụ MacBook nke anụ ọhịa ahụ dị 12-inch, mana laptọọpụ ndị ahụ abụghị nke kachasị adaba maka idezi ma ọ bụ ijikọ ndị nlele 4K na ha.
Apple n'onwe ya kwadoro maka ire ere gị USB-C ka VGA na HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri nkwụnye mana maka ọtụtụ ndị ọrụ, ha dị ka ihe siri ike ma ọ bụ na ịchọrọ nnukwu eriri nkwụnye. Satechi echeela maka ya ma debekwa eriri anyị chọrọ ikwu maka taa.
Satechi ewepụtala USB-C na HDMI USB USB nke na-arụ ọrụ zuru oke na ihe ọhụrụ MacBook Pro. USB ahụ na-eme ka vidiyo vidiyo 4K na 4Hz. Emepụtawo eriri ahụ na ọdịdị nke ịdị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ọ dị na ọla edo, ọlaọcha, ntụ ntụ ntụ na ọla edo bilie. Njirimara ya bu:
● Ntinye vidiyo 4k 3840 x 2160 @ 60Hz
Owu ihe siri ike maka njikọta na-agbanwe agbanwe.
● 2 mita na-agbanwe eriri ya na njikọta aluminom.
Kwunye ma kpọọ.
Nnukwu ndakọrịta na MacBook, MacBook Pro.
Pricegwọ ya bụ 39.99 dollar ma inwere ike inweta ya n’ime njikọ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » New USB-C na HDMI 4K ntụgharị si Satechi
HomePod ga-abụ ụlọ zuru oke maka Siri nwere ọgụgụ isi, Apple na-achọ ndị ọkachamara maka ya
Tim Cook na-ezute Prime Minister nke India, mgbe o kwusịrị na ha ga-emeghe Apple Store na mba Eshia.